Misy mitady hanao fitaovana politika - Madagascar-Tribune.com
Samia tonga saina amin’izao fahantrana izao isika. Ampy izay ka aleo manova toy izay ho ataon’ny sasany fitaovana fitadiavam-bato lava izao. Ireo no teny entin’ny andian’olona mitety trano sy fivarotana ho mariky ny firaisan-kina eny anivon’ny faritra iva.
Tsy voazava mazava kosa anefa na hiaraka amin’ny mpanohitra ankehitriny, na hiaro ny fitondrana no tena tanjon’ireto andian’olona ireto. Ny tsapa kosa anefa, dia nanambara ireo olona ireo, fa rehefa tonga ny “Top”, dia tokony tsy hisy hialangalana amin’izay hetsika ho atao isika mianakavy ety amin’ny faritra iva.
Ny sabotsy tolakandro teo no nahitana izany, teny Andohatapenaka, sy Antohomadinika. Iza no nampaniraka ireo olona ireo ? Tsy mbola nisy kosa anefa fizarana vola, na fanomezana nataon’ireto andian’olona ireto nandritra izay fandresen-dahatra teny anivon’ny fokontany izay.